IZITHOMBE | RayHaber
Izingane Zesitimela Ezikhandwe Ubuhle Be-Eskisehir
Umndeni weRailroad Izingane wahlangana ngesikhathi kuvakashelwa e-Eskişehir ehlelwe ngumphathi uSerkan Başavul e16 Novemba 2019. I-150 ifika ivela e-Adana, Ankara, Izmir, Istanbul naseNazilli. [Okuningi ...]
Imisebenzi yokwakhiwa kabusha yaqedwa ngesikhathi esifushane ngokubambisana kukaMasipala we-Metropolitan noMasipala we-Çankaya eSakarya, eThessaloniki kanye ne-Tuna Street, okungenye yezindawo ezihamba phambili zabahamba ngezinyawo eKKzzlay. Kuvuselelwa kusuka kwendawo eya emapondeni, kusuka ezihlahleni kuya ekuhlalweni kwamabhentshi [Okuningi ...]
Umbukiso othi "Ukusuka e-Istanbul uya eHijaz: Hicaz Railways With Imibhalo" obuhlelwe yiTurkey Cooperation and Coordination Agency (TIKA) neYunus Emre Institute (YEE) kwavulwa e-Irbid, idolobha lesibili ngobukhulu eJordani. I-TİKA ne [Okuningi ...]
eziningi amalungu eTurkey Demiryolc Izingane Iqembu ezifundazweni eziningi, edolobheni Selcuk Aydin ababehlangana kulelo Museum isitimela edolobheni summerhouse. Cishe abantu be-200 ku-Railroad Children Group abayidalile ezinkundleni zokuxhumana basendaweni yase-Çamlık Steam Locomotive Museum [Okuningi ...]
I-ulfzmir Gulf festival, ethathe isigaba sesithathu kulo nyaka, iqale ngezithombe ezinemibala. IMeya kaMasipala wase-İzmir Metropolitan uTunç Soyer udlale ikhwela lokuqala lobuhlanga obekungeza injabulo kulo mkhosi. Iqembu lonke ngabesifazane kuphela [Okuningi ...]